Verizon inozivisa mutengo uye kuwanikwa kweiyo LG Wing inodhura mbiri-screen smartphone
Muri pano: musha / Technology News / famba / Verizon inozivisa mutengo uye kuwanikwa kweiyo LG Wing inodhura mbiri-screen smartphone
September 30, 2020 by Justin26
Verizon nhasi yazivisa zviri pamutemo iyo LG Wing smartphone mitengo uye kuwanikwa.
LG Wing yakasarudzika kwazvo, uye inobvumira vashandisi kuchinjika zvisina musono pakati peMhando yeMhando neSwivel Mode. Mune Swivel Mode, iyo kumberi kwefoni kutenderera zvichitenderedza 90 degrees, ichitarisa iyo Main Screen mumamiriro emamiriro ekuratidzira 3.9 inch Second Screen iyo inovhura zviitiko zvitsva zvevashandisi. Chikumbiro chimwe chete chinogona kuwedzerwa kune ese ari maviri skrini kana maviri maapplication anogona kuratidzwa panguva imwe chete, imwe pane yega kuratidza.
Zvakakosha zveiyo itsva Swivel chiitiko:
Paunenge uchiona YouTube kana Tubi pane preinstalled NAVER Whale browser, vhidhiyo inotamba pa Main Screen nepo Chechipiri Screen ichiratidza makomendi kana yekutsvaga bar.
Kubatana kweLG nevamwe mapuratifomu ekushambadzira akadai saRave naFicto zvinoreva kuti varidzi veLG WING vanogona kunakidzwa nemavhidhiyo izere skrini panguva imwe chete vachitaurirana nevamwe vaoni kuburikidza neChipiri Screen.
LG WING's Multi App chimiro inobvumidza vashandisi kugadzira mapfupi emapara ezvibodzwa zvavanowanzo shandisa pamwechete. Swivel Mode inogona zvakare kuratidza kubatsira paunenge uchityaira, uchibvumira vashandisi kutevera mepu mirayiridzo pane iyo Main Screen inochengetera Chechipiri Screen yekufona, iyo kune mamwe mafoni yaigona kuvhara mepu.
Kuchinja maitiro e LG WING kunogadzira ese marudzi emikana mitsva yekuita zvakawanda uye kunakidzwa zvemukati.
LG yaisanganisirawo yakakura kamera ruzivo muWING, verenga nezve kamera setup pazasi.
Kune vashandisi vanowanzorekodha uye nekugovana hupenyu hwavo hwezuva nezuva vachishandisa mafoni, LG yakashongedza ruoko rwekuvhuvhuta ruoko neepamberi kamera maficha uye matekinoroji chete kune iyo nyowani fomu chinhu. LG WING ine makamera matatu ekumashure - 64MP Ultra High Resolution OIS Wide, 12MP Ultra Wide Big Pixel uye 13MP Wide. Bvumira Dual Kurekodha muSwivel Mode nekushandisa iyo 32MP pop-up kamera uye imwe yefoni yekumashure kamera panguva imwe chete. Mhedzisiro yacho inogona kuchengetwa pamwe chete mufaira rimwe chete, kana mumafaira maviri akapatsanurwa necustomal ratio yakaiswa kune 1: 1 kana 16: 9. Zvakare, iyo Yechipiri Screen inogona kushandiswa seyakagadzwa yekugadzirisa palette apo vhidhiyo kana pikicha ichiratidzwa pane iyo Main Screen. LG WING inouyawo ne LG Musiki Kit, muunganidzwa wemhando yepamusoro yekufungidzira mhinduro kusanganisira Timelapse Control, Voice Bokeh uye ASMR Kurekodha.
Iyo Gimbal Motion Kamera, yepasi rose mu smartphone, inoshandura iyo LG WING's Yechipiri Screen muchibata chiri nyore, ichipa kudzikama kunodiwa kutora yakajeka mapfuti uye akatsetseka vhidhiyo vhidhiyo munzira yakatwasuka neruoko rumwe, zvinowanzoomera kuita neyakajairika bar- nyora mafoni. LG WING inopa mabasa anowanzo kuwanikwa chete pane chaiyo gimbal, seyimbo yekufara yekudzora iyo kamera kamera, kiyi yekudzora kuzungunusa uye kupenya, inotevera nzira yemavhidhiyo akatsetseka kana uchifamba, pani inoteedzera yekutenderera yakatwasuka iine mashoma kumusoro uye pasi zunza. , uye munhu wekutanga kuona maitiro ekutora mafambiro uye zvine simba mafambiro.
Verizon ichapa LG Wing kutanga Gumiguru 15 nema-pre-odhi anotanga musi wa1 Gumiguru, nerutsigiro rwe5G Ultra Wideband, painowanikwa, yekumhanyisa mafirimu e4K nekutora zvinotora masekondi chete. Izvo zvakare ichatsigira Verizon's 5G Nyika yese network kuvhura gare gare gore rino.
LG Wing inodhura $ 41.66 pamwedzi kwemwedzi makumi maviri nemana nekutenga kweVerizon Kadhi Yekubhadhara ($ 24 yekutengesa; 999.99% APR). Verizon zvakare ine izvi zvikuru zvinopihwa zvekubatsira vatengi kuendesa foni kwatiri:
Simuka kusvika kumadhora mazana manomwe nemashanu paunenge uchiwedzera mutsetse pakusarudza Zvirongwa Zvisingagumi uye kutenga LG Wing nekodhi yekutengeserana-inokodzera750
Simuka kusvika pa $ 250 Verizon eGift Kadhi kana uchitenga LG Wing uye porting-mune nhamba kuVerizon6
Simuka kusvika pamadhora mazana mashanu apo vatengi varipo vatenga iyo LG Wing ine inokodzera yezvokutengeserana-mune chishandiso pane sarudza Unlimited Zvirongwa500
LG Wing Tech Mhando:
Chipset: Qualcomm Snapdragon 765G 5G Mobile Platform yakabatanidzwa neSpapdragon X52 5G Modem-RF System
- Main Screen: 6.8-inch 20.5: 9 FHD + P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)
- Yechipiri Screen: 3.9-inch 1.15: 1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)
Ndangariro: 8GB RAM / 128 kana 256GB ROM / microSD (inosvika ku2TB)
- Kumashure: Ultra High Resolution (64MP Standard 2 (F1.8 / 78 ° / 0.8µm) / 13MP Ultra Wide (F1.9 / 117 ° / 1.0µm) / 12MP Ultra Wide Big Pixel (F2.2 / 120 ° / 1.4µm)
- Kumberi: 32MP Yakajairwa 3 (F1.9 / 79.6 ° / 0.8µm)
Inoshanda System: Android 10.0 (Q OS)
Kukura: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
Kubatana: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Inoenderana)
Mavara: Aurora Grey / Illusion Sky
Zvimwe: Gimbal Motion Kamera / Mberi Pop Up Kamera / Hexa Motion Inodzikamisa / AI CAM / Google Lens / Google Mubatsiri / Q Lens / Dual Kurekodha / LG Musiki Kit / Nhema Stabilizer / LG 3D Injini Injini / In-Ratidza Fingerprint Sensor / IP54 Mvura uye Guruva Resistance / Qualcomm® Kurumidza Kubhadhara ™ 4.0+ Tekinoroji / Kusajaidza Kusaina / MIL-STD 810G Kuteerera 4 / LG Kubhadhara
kushanya verizonwireless.com kuti udzidze zvakawanda uye kufanotungamira LG Wing muna Gumiguru.
LG Wing Ongororo
DJI Pocket 2 Ongororo: Iyo yepamusoro-yakasimba 4K muhomwe kamera
Heano maguta ese eUS ane kufukidzwa kwe5G izvozvi
LG Mapapiro: Pamusoro 5 Muurayi Zvimiro